ဇနီးဖြစ်သူ နန္ဒာလှိုင် ရုတ်တရက် ဆေးရုံတက်ပြီး ဆေးကုသမှုခံ ယူနေရကြောင်း အသိပေးလာတဲ့ ဦးဇေသီဟ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ဇနီးဖြစ်သူ နန္ဒာလှိုင် ရုတ်တရက် ဆေးရုံတက်ပြီး ဆေးကုသမှုခံ ယူနေရကြောင်း အသိပေးလာတဲ့ ဦးဇေသီဟ
ဇနီးဖြစ်သူ နန္ဒာလှိုင် ရုတ်တရက် ဆေးရုံတက်ပြီး ဆေးကုသမှုခံ ယူနေရကြောင်း အသိပေးလာတဲ့ ဦးဇေသီဟ
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော နန္ဒာလှိုင် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။သူမသရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများစွ ာရှိတာကြောင့် သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်အခိုင် အမာရရှိထားသူပါ။အောင်မြင်မှုများစွာရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကခုဆိုရင်သူ မချစ်တဲ့မိသားစုလေးနဲ့ ဘဝကို အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေကတော့ တစ်ကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း ကို အလူးအလဲ ခံစားခဲ့ရပြီး အောက်ဆီဂျင်မရတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင် အလွယ်တကူမရတဲ့ အတွက်ကြောင့် လူအများ အပြားလည်း သေဆုံးခဲ့ရတာကို စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့မြင်ကြားသိရပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း အောက်ဆီဂျင် လိုအပ်နေကြတဲ့ အရေးပေါ်လူနာများအတွက် သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်တို့ မိသားစုက အောက်ဆီဂျင်စက်များ အခမဲ့ ငှားရမ်းပေးခဲ့တဲ့အပြင် အောက်ဆီဂျင် အလွယ်တကူ ဖြည့်တင်းနိုင်အောင်အောက်ဆီဂျင် စက်ရုံ တည်ဆောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်.
လက်ရှိမှာတော့ နန္ဒာလှိုင်တို့ မိသားစုရဲ့ အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံဟာ စတင်လည်ပတ်နေပြီး လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ လူမှုရေး ပရဟိတအသင်းတွေကို မျှဝေလှူဒါန်းနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာလည်း နန္ဒာလှိုင်က ဆေးရုံတက်ပြီးဆေးကုသမှု ခံယူနေရတယ်လို့လည်း ဦးဇေသီဟ ကသူ့ရဲ့ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ တင်လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာရောဂါနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့တော့ သေချာမပြောပြထ ားပါဘူး. ဒါ့ကြောင့် စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးလည်း နန္ဒလှိုင် နေပြန်ကောင်းဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါအူံးနော်.
Source: Zay Thiha
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…ႏိုင္ငံေက်ာ္႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာ နႏၵာလႈိင္ ဟာဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြခ်စ္ခင္အားေပးရတဲ့ႏိုင္ငံေက်ာ္အႏုပညာရွင္တစ္ဦးပါ။သူမသ႐ုပ္ေဆာင္႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ္ကားမ်ားစြ ာရွိတာေၾကာင့္ သူမကိုခ်စ္တဲ့ပရိသတ္အခိုင္ အမာရရွိထားသူပါ။ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့ သူမကခုဆိုရင္သူ မခ်စ္တဲ့မိသားစုေလးနဲ႔ ဘဝကို ေအးခ်မ္းစြာျဖတ္သန္းေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္သူေတြကေတာ့ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့တဲ့ ကိုဗစ္တတိယလႈိင္း ကို အလူးအလဲ ခံစားခဲ့ရၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္မရတဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ အလြယ္တကူမရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လူအမ်ား အျပားလည္း ေသဆုံးခဲ့ရတာကို စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရပါတယ္။ လတ္တေလာမွာလည္း ေအာက္ဆီဂ်င္ လိုအပ္ေနၾကတဲ့ အေရးေပၚလူနာမ်ားအတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နႏၵာလႈိင္တို႔ မိသားစုက ေအာက္ဆီဂ်င္စက္မ်ား အခမဲ့ ငွားရမ္းေပးခဲ့တဲ့အျပင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ အလြယ္တကူ ျဖည့္တင္းႏိုင္ေအာင္ေအာက္ဆီဂ်င္ စက္႐ုံ တည္ေဆာက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.
လက္ရွိမွာေတာ့ နႏၵာလႈိင္တို႔ မိသားစုရဲ႕ ေအာက္ဆီဂ်င္စက္႐ုံဟာ စတင္လည္ပတ္ေနၿပီး လိုအပ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ လူမႈေရး ပရဟိတအသင္းေတြကို မွ်ေဝလႉဒါန္းေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေလးမွာလည္း နႏၵာလႈိင္က ေဆး႐ုံတက္ၿပီးေဆးကုသမႈ ခံယူေနရတယ္လို႔လည္း ဦးေဇသီဟ ကသူ႔ရဲ႕ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ တင္လာခဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေရာဂါနဲ႔ ေဆးကုသမႈခံယူေနရတယ္လို႔ေတာ့ ေသခ်ာမေျပာျပထ ားပါဘူး. ဒါ့ေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးလည္း နႏၵလႈိင္ ေနျပန္ေကာင္းဖို႔ ဆုေတာင္းေပးၾကပါအူံးေနာ္.
Previous post ကိုဗစ်ကပ် ရောဂါတွေ ပြီးသွားတဲ့အခါ ပထမဆုံးသူလုပ်ချင်တဲ့ အရာတစ်ခု ကို ပရိတ်သတ်ကြီးအား ပြောပြ လာတဲ့ “စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်”
Next post ဒူဘိုင်းမြို့ရဲ့ ရင်ခုန်စရာကောာင်းလွန်း လှတဲ့ အလှတရားတွေ ကို ရဟတ်ယဉ်ပေါ်ကနေ ခံစား ကြည့်ရှုနေတဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ဗီဒီယို